Boqortooyada Eebbe (Qaybta 5), Kaniisadda Adduunka Ee Caalamka Switzerland (WKG)
Boqortooyada Ilaah <abbr> (Qaybta 5)
Malaki ugu dambeeyay ee aan la macaamilnay, sida runta isku dhafan ee dhabta ah iyo xaqiiqada jirta ee jirta laakiin aan weli la dhammaystirin Boqortooyada Eebbe waxay Masiixiyiinta qaar si qalad ah ugu horseedday guul, kuwa kalena aamusnaan. Maqaalka waxaan ku qaadanaynaa qaab ka duwan sidii looga jawaabi lahaa runtaan adag ee iimaanka leh.
Kaqeybqaadso shaqada Ciise ee socota ee adeega Boqortooyada Eebbe
Halkii guusha (dhaqdhaqaaqaas kaas oo ujeedadiisu tahay inuu keeno boqortooyada Ilaah) ama aamusnaanta (dabeecadaas oo ka soo baxda wax kasta oo Ilaah loo daayo), dhammaanteen waxaa naloogu yeedhay inaan ku noolaano nolol rajo leh oo qaab u siisa calaamadaha dhabta ah ee boqortooyada Ilaah mustaqbalka. Dabcan, calaamadahani waxay leeyihiin macno xaddidan - ma abuuraan Boqortooyada Ilaahay, mana dhigayaan kuwo hadda jooga oo run ah. Si kastaba ha noqotee, waxay tixraacaan wixii ka dambeeya naftooda. Isbeddel ayey ku sameeyaan halkan iyo hadda, xitaa haddii aysan saameyn ku yeelan karin wax walba. Waxay sameeyaan qaraabo mana aha farqi weyn. Tani waxay la jaanqaadaysaa ulajeeddooyinka Ilaah ilaa iyo inta kaniisaddu ka welwelsan tahay adduunkan sharka leh. Qaar ka mid ah kuwa doorbida habka guusha ama habka aamusnaanta ee fikirka ayaa ka hor imaan doona tan oo sheegaya in ay adag tahay ama aan mudnayn in la xuso in la isticmaalo calaamadaha tilmaamaya boqortooyada Ilaah ee mustaqbalka. Aragtidooda, uma qalmaan haddii aysan keeni karin isbeddel waara - haddii aysan horumarin karin adduunka ama ugu yaraan ka dhigi karaan kuwa kale inay Ilaah rumaystaan. Laakiin waxa diidmooyinkan aan tixgalin la siinin ayaa ah xaqiiqda ah in astaamaha la soo saaray, ku meelgaarka ah iyo kan ku meelgaarka ah ee Masiixiyiintu halkan u dejin karaan oo hadda aan lagu arki doonin si ka duwan boqortooyada Ilaah mustaqbalka. Maxaa diidaya? Sababta oo ah ficil Christian waa macno ka qayb qaadashada shaqada joogtada ah ee Ciise, by Ruuxa Quduuska ah. Ruuxa Quduuska ah waxaan awoodnaa inaan ku biiro Boqorka boqornimadiisa halkan iyo hadda waqtigan xaadirka ah, waqtiga adduunka sharka - waqti laga adkaan doono. Sayidkii mustaqbalka Boqortooyada Eebbe wuxuu soo dhexgalin karaa da’da jirta oo wuxuu adeegsan karaa marag-turka, marag turka ku meel gaarka ah iyo kan ku meel gaarka ah ee Kaniisadda. Kuwani waxay samaynayaan qaraabo laakiin muuqata oo muuqda oo halkan iyo imminka ah, xitaa haddii aysan keenin isbeddelka muhimka ah ee la socda gacan qabashada dhammaystirka boqortooyada Ilaah.
Iftiinka boqortooyada mustaqbalka ee Ilaah ayaa ina soo gaadha oo na siiya jidkayaga adduunkan mugdiga ah. Sida ay iftiinka xiddigtu u ifiso mugdiga habeenka, calaamadaha kiniisadda ee joogitaanka erayga iyo camalkuba waxay tilmaamayaan boqortooyada Ilaah mustaqbalka ee qorraxdu. Qodobbadaas iftiinka yar yar ee iftiinka ayaa isbadal keena, haddii ay si uun u noqdaan, si ku meel gaar ah iyo si ku meel gaar ah. Iyada oo loo marayo shaqada nimcada ee Ilaaha Qaadirka ah, waxaan noqon aalado leh astaamahayaga iyo markhaatifurkeenna, oo lagu hagray ficilka Ereyga Eebbe iyo Ruuxa Quduuska ah. Sidan ayaan dadka u taaban karnaa oo ugu raaci karnaa Masiixa dhanka boqortooyadiisa mustaqbalka. Ilaah halkan wuu ku shaqeeyaa halkan iyo hadda kahor intaanu boqortooyadu dhammaysan. Annagu ergo ayaannu u nahay Masiix Masiix; maxaa yeelay, Ilaah baa na dhiirrigaliya (2 Korintos 5,20). Isaga oo adeegsanaya ereyga wacdiga, maadaama uu adeegsanayo Ruuxa Quduuska ah, Ilaah wuxuu durba dadka ku caawiyaa caqiidadiisa xagga ruux ahaaneed si ay uga qeybgalaan boqortooyadaan sida muwaadinimada boqortooyada Ilaah mustaqbalka. (Rooma 1,16). Koob kasta oo koob biyo ah oo lagu soo bandhigo magaca Masiixu abaal marin ma leh (Matayos 10,42). Sidaa daraadeed, waa inaanaan u eryin astaamaha ama maragyada rumaystayaasha Kaniisadda Ilaah sida duulaya, astaamo saafi ah ama tilmaam u tilmaamaya wax aan jirin ama aan run ahayn. Masiixu wuxuu ku darsaday shaqadeena astaamaha astaantiisa oo wuxuu u adeegsadaa maragkeenna inuu dadka ku soo jiito xiriir shaqsiyeed oo iskiis ah. Markaa waxay dareemayaan jiritaanka boqornimadiisa jacaylka ah waxayna la kulmaan farxad, nabad iyo rajo inta lagu jiro xukunkiisii ​​xaqnimo oo ay ka buuxaan jacayl. Way iska cadahay calaamadahani inaysan muujineynin runta oo dhan waxa mustaqbalkeena na heysto, laakiin ay si fudud farta ugu fiiqeyso. Waxay tilmaamayaan - labadaba iyo kan mustaqbalba - Tani waa sida Masiixu, noloshiisa iyo shaqadiisa dhulka ku noqday Bixiyaha iyo Boqorka uunka abuurka oo dhan, oo matalaya calaamadahan maahan fikirro, ereyo, fikrado ama shaqsi , waayo-aragnimada ruuxiga ah ee aad u gaarka ah. Astaamaha Masiixiyiinta ee iimaanka ayaa ka marag kacaya waqti iyo meel bannaan, hilib iyo dhiig, cidda Ciise yahay iyo waxa boqortooyadiisu mustaqbalka noqon doonto. Waxay u baahan yihiin waqti iyo lacag, dadaal iyo xirfad, tixgelin iyo qorsheyn, iyo sidoo kale isku xirnaanshaha shaqsi iyo bulshada. Ilaaha Qaadirka ah ayaa uga faa'iideysan kara iyaga oo u maraya Ruuxiisa Quduuska ah oo sidaas sameeya si ay u fuliyaan ujeeddada loo jiheeyay: hordhac u ah Ilaah xagga Masiixa. Hordhaca noocan oo kale ah wuxuu midho u badalayaa qaab isbedelka basaska (Nolosha ama isbedelka nolosha) iyo iimaanka, iyo sidoo kale nolol rajo buuxda ka leh boqortooyada Ilaah ee mustaqbalka.
Marka waxaan u sameyneynaa waqtigeena, tamarteena, Kheyraadka, hibada, iyo waqtigayada firaaqada ah ee loo helo Sayidkeenna adeegsiga. Waxaan la dagaallannaa baahiyaha baahan ee adduunkeenna hadda jira. Waxaan ka caawinaa wax qabadkeena iyo kaalinteenna firfircoon, oo aan la wadaagno dadka isku fikirka ah gudaha iyo banaankaba baaristayada. Qaabaynta walaacyada adduunku waxay sidoo kale u dhacdaa iyada oo lala kaashanayo kuwa ka shaqeeya bulshooyinkaas ha ka tirsanayn (wali). Markhaatifigayaga iimaanka, oo aan bixinno ee ku saabsan dib-u-dhigis, waa la sameyn karaa shaqsiyan iyo ereyo, laakiin waa in sidoo kale loo adeegsadaa meel ficil ahaan iyo si wada jir ah. Markaan sidaa yeelno, waa inaan ka faa'ideysanaa intii karaankeenna ah. Wax kasta oo aan qabanno oo aan dhahno, waxaan u dirnaa isla fariin dhamaan siyaabaha aan ku heli karno, oo ku dhawaaqaya kan ku jira Masiixa iyo in boqornimadiisa ay weligeed jiri doonto. Waxaan ku nool nahay halkan iyo hadda, xitaa adduunka dembiga ah, xagga wadaagista Masiixa iyo rajada ah dhammaystirka kaamil ah ee boqornimadiisa. Waxaan ku nool nahay rajo buuxda oo cirka iyo dhul cusub mustaqbalka adduunka. Waxaan ku nool nahay waqtigan aqoonta ah in dunidan dunidan tahay - maxaa yeelay magaca ciise masiix iyo faragalinta runti waa sidan. Waxaan ku nool nahay xaqiiq ah in boqortooyada Ilaah ay u soo dhowaanayso kaamilnimada - maxaa yeelay taasi waa sax sida ay tahay!
Markaa, maraggeenna, oo aan u siinno Masiixiyiin ahaan, in kasta oo ay yihiin kuwa aan dhammaystirnayn, u baahan oo wakhti ku xaddidan, waa run xagga dareenka ah in ay saamayneyso xaaladdeena jirta iyo dhammaan xiriirkeenna, xitaa haddii lafteeda ay tahay boqortooyada mustaqbalka ee Ilaah, taas oo ku jirta Halkan iyo hadda weli ma aha mid kaamil ah, oo aan ka muuqanayn run ahaantiis. Waa run macno ahaan marka loo eego nimcada Ilaah ee aan wadaagno, sida ay ahaan jirtay, iniin khardal le'eg waxa Ilaaha Qaadirka ahi haatan ku sameeyo Ruuxa Quduuska ah si dadku uga warqabaan Ciise Masiix iyo boqortooyadiisa mustaqbalka. Maanta, sida ku qoran doonista Eebbe, waxaan ka qeyb qaadan karnaa shaqsiyanka iyo qaab dhismeedka bulshada ee habka nolosheena, qaar ka mid ah barakada boqornimada Masiix iyo boqortooyada.
Runta ayaa la muujiyay
Si tan loo caddeeyo wax yar, waa in lagu tilmaamaa ficilkeenna in aanan u diyaarsaneynin dhulka dhabta ah ee boqornimada Masiixa, oo aannan xaq u caddeyneynin. Ilaah, Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah ayaa horey u sameeyay tan. Boqortooyada Ilaah mustaqbalka waa mid dhab ah oo durba run noqotay. Waan hubnaa soo laabashadiisa. Waan ku kalsoonaan karnaa. Xaqiiqadan naguma xirna. Waa shaqo Eebbe. Markaa maxaynu ku samaynaa maraggeenna, calaamadaha aan siineyno qaab ahaan, haddii ayan ku guuleysanin Boqortooyada Ilaah, ama ayan sii kordheyn? Jawaabtu waa in astaamahayaga aan dejineyno ay jajabnaan u tahay boqortooyada Ilaah ee soo socota. Hawsha hadda jirta - mudnaanteena - ayaa ah inaanu markhaati ka nahay runnimada Boqortooyada Ilaahay xagga hadalka iyo camalka.
Markaas maxay dhammaadka, soo noqoshada Masiixu yeeli doontaa? Soo laabashadiisu ma siineyso xaqiiqada kama dambaysta ah ee boqortooyada Ilaah, sida haddii ay kadhigtay kaliya awooda lagama maarmaanka ah ilaa markaas. Waxay haddaba tahay xaqiiq dhameystiran maanta. Ciise Masiix hore ayuu Sayidkeenna u yahay Bixiyahayaga iyo Boqorka. Wuu xukumaa. Laakiin boqortooyadii Ilaah weli waa qarsoon tahay. Baaxadda boqornimadiisa ma gaadho si buuxda adduunyada xaadirka ah. Markuu Masiixu soo noqdo, Boqortooyada Ilaah waxaa loo muujin doonaa kaamil ah dhammaan natiijooyinkeeda oo dhan. Soo laabashadiisa ama dib-u-soo-celintiisa (Parousia) waxaa wehelin doona muujinta (apocalypse) run ahaanshaha iyo xaqiiqada cidda uu yahay iyo waxa uu ku qabtay, waqtigaas runta dhabta ah ee uu Masiixu yahay iyo waxa uu inagu sameeyo wuxuu noqon doonaa kuwayaga Badbaadinta ayaa la muujin doonaa dadka oo dhan. Ugu dambayntiina waa la soo dejin doonaa waxa ka kooban qofka iyo shaqada Ciise Masiix. Sharafta waxyaalahan oo dhan ayaa iftiin doona meel kasta oo sidaasna waxay ku soo bixi doontaa waxtarkiisa oo dhan. Waqtiga in laga gaabiyo, si ku meel gaadh ah iyo wakhti xaddidan ayaa markaa dhammaanaya. Boqortooyada Ilaah mar dambe ma qarsoon doonto. Waxaan geli doonnaa Cirka iyo Dhulka cusub. Shahaadada looma baahna; maxaa yeelay kulligeen waxaan la kulmi doonnaa xaqiiqda nafteena. Waxaas oo dhami waxay dhici doonaan soo laabashada Masiixa.
Marka noloshu Masiixiyiintu maaha mid ku saabsan ka dhigista awoodda boqortooyada Eebbe mid wax ku ool ah. Ma ahan shaqadeena in la xiro farqiga u dhexeeya xaqiiqada dunida dembiga leh iyo sida ugu wanaagsan ee boqortooyadii Eebbe ku dejiso dhulka. Ma aha dadaalkayaga Ilaaha Qaadirka ah inuu ka qaado xaqiiqada kuwa jabay, kana soo horjeedo abuurista oo uu ku beddelo ku habboon adduunka cusub. Maya, waa halkii ay ahayd in Ciise yahay boqorka boqorrada iyo sayidyada sayidyada oo dhan iyo in boqortooyadiisa - in kasta oo ay wali qarsoon tahay - runtiina runtii jirto. Waqtiga xaadirka ah, wakhtiga adduunka sharka leh ayaa dhaafi doona. Waxaan hadda ku nool nahay, sidii inaynan run ahayn, musuqmaasuq, qalloocnaan, muuqaal qalloocan abuurkii Ilaah abuuray, oo Masiixu dib u helay isagoo dib ugu soo celinaya dariiqa saxda ah, kuna guuleysta awoodaha sharka. Qaabkaas, waxay u noolaan kartaa ujeeddadiisii ​​asalka ahayd ee xaqiijinta qorshaha ugu dambeeya ee Eebbe. Thanks to Masiix, abuurkoo dhan baa laga sii daayay addoonsigoodii oo taahooda wuu dhammaaday (Rooma 8,22). Masiixu wax kasta wuu cusboonaysiiyaa. Taasi waa xaqiiqda ugu muhiimsan. Laakiin xaqiiqadan weli waa mid si buuxda loo muujin doonaa. Mar hore, iyada oo loo waxyooday Ruuxa Quduuska ah ee Ilaah, waxaan marqaati kadhici karnaa, taam ahaansho iyo waqti xaddidan, dhammaan dhinacyada nolosha ee la xiriira xaqiiqada mustaqbalka, mana ka marag fureyno suurta galnimada oo runtii maahan mid aan garowsanno, laakiin Masiixa iyo boqornimadiisa, oo maalin uun noqon doona mid kaamil ah. Runtayadu waa rajadayada saxda ah - mid aan ku nool nahay maanta, sida maalin kasta.
Bourgeois iyo jawiga siyaasadeed Maxay tani uga dhigantahay bourgeois iyo heerka siyaasadeed ee Masiixiyiinta garta xukunka Masiixa ee ku nool rajada boqortooyada Ilaah ee soo socota? Muujinta Kitaabka Qudduuska ahi ma taageerayso fikradda ah "Masiixi" ee Masiixi ah ee xisbi siyaasadeed, qaran ama hay'ad ka baxsan kaniisada. Laakiin sidoo kale kuma baaqayo fara-gelin - oo lagu muujiyey ereyga 'gooni goosadnimo'. Masiixu wuxuu ku wacdiyey inaanan ku noolaan karin adduunkan dembiga leh iyo musuqmaasuqa (Yooxanaa 17,15). Markii ay musaafuris ku joogeen waddan shisheeye, reer banii Israa’iil waxaa lagu xukumay inay daryeelaan wanaagga magaalooyinka ay deggan yihiin (Yeremyaah 29,7). Daanyeel wuxuu u adeegay oo ugu tabarucay Ilaah xagga dhaqanka jaahilka, isla mar ahaantaasna wuxuu u go'ay Ilaahii reer binu Israa'iil. Bawlos wuxuu noogu dardaarmay in aan u duceyno mas'uuliyiinta iyo in aan ixtiraamno awoodda aadanaha ee wanaagga dhiirrigelisa xumaanta. Wuxuu ina farayaa inaan ilaalino sumcadeena wanaagsan xitaa kuwa aan wali rumaynin Ilaaha runta ah. Erayadaas digniinta ah waxay muujinayaan xiriir iyo sidoo kale dulsaar ilaa laga soo qaadanayo mas'uuliyadda muwaadin ahaan iyo qaab dhismeedka hay'adda - mana aha awood buuxda.
Barista kitaabiga ahi waxay tilmaamaysaa inaan nahay muwaadiniin waqtigan dunidan ah. Laakiin isla waqtigaas, waxay ku dhawaaqeysaa, in ka sii muhiimsan, inaan nahay muwaadiniinta boqortooyada Ilaah. Bawlos wuxuu ku yidhi warqadihiisii: «Marka idinku hadda ma ihid qariib iyo shisheeye, laakiin waxaad tihiin muwaadiniinta quduusiinta iyo saaxiibbada Eebbe» (Efesos 2,191) oo odhanaya: «Laakiin xuquuqdeenna waxay cirka ku jirtaa; Meel kasta oo aan ka rajeynno Badbaadiye, Rabbi Ciise Masiix » (Filiboy 3,20). Masiixiyiintu waxay leeyihiin xuquuq madaniga ah oo cusub oo aan mudnaan la saarin ka leh waxyaalaha adduunka. Laakiin ma tirtirayo xuquuqdeena madaniga ah ee hore. Intii uu xirnaa, Bawlos ma beenin muwaadinnimadiisa Rooma laakiin wuxuu ka faa'iidaystay si loo siidaayo. Masiixiyiin ahaan, waxaan aragnaa xuquuqdeena madaniga ah ee hore - oo ku xusan xukunka Masiixa - si xagjirnimo ahna loola xiriirinayo macnahooda. Mar labaad, waxaan la nimaadnay arrimo murugsan oo innaga horseedi kara xallin hordhac ah ama fududeynta dhibaatada. Laakiin iimaanka, rajadu iyo jacaylka ayaa ina hagaya si aan u adkeyno adkaanta dacwaddayada, boqortooyada iyo xukunka Masiixa.
Xuquuqda madaniga ah ee labanlaabmay
Ka dib markii dib loo eego Karl Barth dib u eegista waxbarista kitaabiga ah iyo maskaxda ku haynta waxbarista kaniisadda illaa da'da, waxay umuuqataa kuwa ka tirsan Masiixa iyo boqortooyadiisa waqtigan dunidan inay ka tirsan yihiin laba gole oo aad u kala duwan isla waqtigaas. Waxaan leenahay laba xuquuq muwaadinimo. Xaaladda cakiran ee arrimahani waxay umuuqataa lama huraan maxaa yeelay waxay si toos ah ula socotaa runta in laba jeer adduunyadu is dhaafsan yihiin, laakiin ugu dambeyntii mid keliya, oo ah mustaqbalka, ayaa ka guuleysan doona. Mid kasta oo ka mid ah xuquuqdeenna madaniga ah wuxuu la imaadaa waajibaadyo lama huraan ah, loomana diidi karo inay isku khilaafo midba midka kale. Gaar ahaan, ma jiro wax dammaanad qaadaya in qiime cayiman aan la bixin doonin marka loo eego ka go'naanta labadoodaba. Sidaa daraaddeed Ciise wuxuu xertiisii ​​u fasiray: «Laakiin taxaddar! Waayo, iyagu waxay kuu gacangelin doonaan maxkamadaha, oo sunagogyada waxaa laydinku karbaashi doonaa, oo waxaa aawaday laydiin hor geeyn doonaa taliyayaal iyo boqorro inay marag ku noqoto iyaga. (Mark 13,9). Xaaladaha la midka ah, oo ka tarjumaya wixii ku dhacay Ciise laftiisa, ayaa laga soo xigtay kitaabka Falimaha Rasuullada. Khilaafaadku wuxuu ka dhex dhici karaa labada xuquuq ee madaniga ah, kuwaa oo adag, haddiiba ay tahayba, in si buuxda loogu xalliyo adduunkan hadda jira.
Ku xiro waajibaadka laba jibaarka ah xarunta dhabta ah
Waa muhiim in la garto sida labadan qaybood ee waajibaadka si habboon loogu xidhiidhiyo. Caadi ahaan waxtar ma leh in laga fiirsado inay u tartamayaan, xitaa haddii ay mararka qaar isku khilaaftaan. Mana aha wax caawinaad ah in la arko iyagoo si habsami leh u abaabulan, halkaas oo had iyo jeer ahmiyad la siinayo ka dibna culaysyo is xig xiga, taas oo macnaheedu yahay in tallaabo labaad ama saddexaad la gaadhayo kadib markii mudnaanta la siiyay ka hor leeyihiin. Xaaladdan oo kale, waxay ku dhacdaa xaqiiqada ah in qaar badan, haddii aan badan ahayn, waajibaadka lagu dhawaaqay inay yihiin dugsi sare ay ugu dambeyntii yihiin kuwo la dayacay oo la dayacay.
Intaas waxaa sii dheer, macno ma leh in la doorto hanaan wax habeyn nidaamsan ah oo la raacdeeyay taas oo ah arrimaha sare, maadaama laga soo qaatay ahmiyadaha, la xalliyo. Sida ku xusan nidaamkan, waxaan hubineynaa inaan qabsano waajibaadka aasaasiga ah ee kaniisadda dhexdeeda si aan caddaalad ugu sameeyno kuwa dugsiga sare ka dhex jira ee kaniisadda, sida inay yihiin kuwo madaxbannaan oo raacaya qawaaniinteena ama heerarkeenna, ujeeddooyinka ama ujeeddooyinka go'aaminaya sida mas'uuliyadda loo yahay. wuxuu ka dhex muuqdaa aag aan kaniisad ku jirin. Qaabkan noocan ahi wuxuu horseed u yahay qayb hoosaad aan caddaalad u samayn xaqiiqada ah in boqortooyadii Ilaah ay mar hore soo gashay adduunkan, sidaas darteedna waxaan ugu nool nahay sidii ay isugu soo duubnayd xilliyadii. Fikradda ah mudnaanta waajibaadka marag ka ah kaniisadda marwalba waxay saameyn ku leedahay sida aan ugu dhowaanno dugsiga sare, bulshadayada adduunka. Labada qaab shaqadeed ee isku dhafan ayaa midba midka kale ku koobnaanayaa, taas oo ah rajadayada boqortooyada Ilaah ee mustaqbalka iyo markhaatigayaga, dhammaan falalkayaga - mudnaan u leh - boqortooyada Ilaah mar dambe sii ahaan doonto mid qarsoon ama mid labaad ah. Marka la eego xukunka Masiixa, midnimada aayaha uu Eebbe ku mannaysto abuurista oo dhan, iyo dhammaystirka wax walba oo Masiixa ku hoos jira sida Boqorka Boqorka iyo Sayidka sayidyada, howsha Qaadirka ahi waa udub dhexaadka dhabta ah - oo ah udub dhexaadka labada bulsho ee aan ka tirsanahay. Dhamaan ficillada aadanaha waa in la qorsheeyaa, la habeeyo oo loo dejiyaa adeeggan qodobkan dhexe, waana in lagu dabaqaa gabi ahaanba. Tixgeli saddex-abuurka ah ee Ilaah diirada ku taxan wareegyo taxane ah oo dhammaantood isku xarun wada ah. Ciise Masiix oo leh boqortooyadiisa mustaqbalku waa xaruntan. Kaniisadda, oo iska leh Masiixa, ayaa garaneysa oo isaga u bareertay keligiis waxayna taagan tahay wadnaha wareega goobada ku xeeran. Kaniisadda ayaa garaneysa xaruntan. Waxay ka ogtahay astaamaha boqortooyada mustaqbalka. Rajadeedu waxay ku saleysan tahay dhul adag waxayna leedahay fikrad sax ah oo ku saabsan jiritaanka jacaylka, laga bilaabo cadaaladda illaa bulshada dhabta ah ee dadka Masiixa. Adeeggoodu waa inay ka dhigaan xaruntan mid muuqata oo ay ugu yeerato dadka kale inay galaan goobahan dhexe maxaa yeelay waa isha noloshooda iyo rajadooda. Dhammaan waa inay ka tirsan yihiin labada bulsho! Xarunta jiritaankooduna sidoo kale waa udub dhexaadka jiritaanka kaniisadda, xiitaa haddii waajibaadkooda daacadnimadu ay khuseeyaan oo keliya dhammaan bulshada dhexdeeda si ballaaran. Marka loo eego himilooyinkiisa, Ilaah ee ku jira Masiixa waa udub dhexaadka uunka iyo sidaa darteed labada bulshoba. Ciise Masiix waa Sayidkeenna iyo Bixiyaha abuur kasta - oo ah xoog iyo amar kasta, bal inuu yahay mid laga war hayo iyo in kale.
Kaniisadda madaniga ah ee ka baxsan kaniisadda waxaa loo qaadan karaa inay tahay goob wareegsan, oo masaafad weyn uga jirta daarta gudaha ee kaniisadda kiniisadda. Iyadu waxba kama oga xarunta, mana aqoonsana, howsha ay ilaahay u dirtayna ma aha inay muujiso. Ujeeddadiisu ma aha in la qaato doorkii kaniisadda ama in la beddelo (sidii lagu tijaabiyey Nazi Jarmalka oo ay ansixiyeen hoggaamiyeyaasha kaniisadda dawladda Jarmalka). Kaniisadda sidoo kale looma baahna inay qabato howlaheeda bulsho ahaan. Laakiin bulshada madaniga ah, oo ku dhexyaal goobada ku xeeran, ayaa la wadaaga isla diiradda, iyo himiladeeda gebi ahaanba waxay ku xidhan tahay ciise, Sayidku waqti iyo meel walba wuu joogaa, taariikhda oo dhan iyo awooda oo dhan. Bulshadu sida aan ogsoonahay inaysan ka madax banaaneyn xarunta wadajirka ah, xaqiiqda nololeed ee isku mid ah oo Kaniisaddu aqoonsan tahay taasna waa waajibaadkeeda ugu dambeysa ee aaminnimada, sidaa darteed waxay ku xiran tahay kaniisadda, xubnaheeda, oo ku kala nool labada wareeg, in si joogto ah loo xasuusiyo oo loo xasuusiyo kooxda ballaaran, weyn ee xaqiiqda udub dhexaadka ah ee Ciise iyo xukunkiisa mustaqbalka. Oo waxay ku dhacdaa cadaalad howshan iyada oo isku dayeysa in ay siiso qaab qaab wax qabad leh, noocyo ahaansho iyo qaabab lagula macaamilo midba midka kale bulshada dhexdeeda ah, kaas oo - si aan toos ahayn - u tixraac taas guud, xaqiiqda dhexe. Tilmaamadan qaab nololeed, oo kaalin ka qaadanaysa baaxadda balaaran ee waajibaadka, waxay ku heli doontaa astaamaha dhaqankooda kaniisada ama waxay la jaan qaadi doontaa. Laakiin waxay awood u yeelan karaan oo keliya inay ugu muujiyaan si aan toos ahayn, si aan qarsoodi ahayn, badanaaba aan wali si gunaanad ah oo aan qarsoon lahayn. Si kastaba ha noqotee, tan waa in la filayaa. Bulshada guud ma aha kaniisadda mana aha inay taasi ahaato haba yaraatee. Laakiin waa inay had iyo jeer ka faa'iideysataa iyada maxaa yeelay xubnaheeda ayaa doonaya inay mas'uul ka noqdaan iyada iyo sidoo kale Rabbiga.
Calaamadaha isbarbar dhiga ee ilaalinta iyo ilaalinta
Xaqiiqada ah inaan ku dhex soconno waqtigan xaadirka ah, waqtiga adduunku sharku wuxuu si gaar ah ugu yahay kuwa jooga aaggan ballaadhan ee bourgeois kuwaasoo ah kuwa geliya rajadooda mustaqbalka adduunka kuwa yaqaana oo caabuda xarunta nool. Aasaaska fiqi ahaaneed iyo ilaha ruuxiga ah ee wehelnimada furan ee leh Ilaah, mahadsanid Ciise Masiix, looma muujin ama si ikhtiyaar ah uma ay adeegsadeen howlahaas muwaaddinnimada ah ee lagu fulinayo adeegga bulshada ku xeeran. Laakiin ku dhaqanka, heerarka, mabaadii'da, xeerarka, sharciyada, ahaanshaha, iyo astaamaha aaggan ballaaran ayaa laga yaabaa in lagu sii dhexgalo ama ka yar lala heshiiyo, ama, sidii la rabay, la iskugu raaco nolosha Ilaah ee innaga Masiixa ku jira. Saameynta masiixiga waxaa loo qorsheeyay in si xikmad leh loogu daro aag ballaaran oo mas'uuliyad ah iyo, intii suurtagal ah, in la hirgaliyo sida ugu suurta galka ah qaab dhismeedka, mabaadi'da dabeecadda iyo ficillada sida ugufiican ula jaanqaada himilooyinka Ilaah iyo waddooyinka. maalin uun in dunida oo dhan la muujiyo. Waxaan dhihi karnaa kaniisada, bulshada balaaran, waxay u adeegtaa nooc damiir leh. Waxay raadineysaa inay ka hortagto bulshada ku hareereysan inay ka sii fogaadaan himilada Ilaah iyo ujeeddada aadanaha. Oo sidaas ma aha oo kaliya iyada oo lagu dhawaaqo, laakiin iyada oo loo marayo ka-qaybgalka shakhsiyadeed, kaas oo shaki la'aan aan la heli karin iyada oo aan lagu bixin qiimaha iyada. Ereyga iyo camalkaba, waxay u adeegtaa sidii ilaalin iyo ilaaliye, xitaa hadii xigmaddeeda, digniinoteeda iyo balanqaadkeeda mararka qaar la iska indhatiro ama la diido.
U oggolow calaamadaha aan tooska ahayn ee rajo
Xubnaha Kaniisadda ayaa ku kobcin kara deegaankooda dhaqameed - sida nooc xoog wadis ah ama tusaale ifaya - oo leh dheefaha bulshada, iyo sidoo kale iyada oo loo marayo qaab-dhismeed urur iyo qaab-soo-saar oo quudiya injiilka Masiix. Laakiin marag noocan oo kale ah ayaa u adeegi kara oo keliya tixraac aan toos ahayn oo taageeri kara oo keliya, shaqada ruuxiga ah iyo farriinta Kaniisadda, Ilaah xagga Masiixa, iyo sidoo kale joogitaanka iyo imaatinka boqortooyadiisa. Wax ka qabadyada hal-abuurnimo, ee u adeega sidii calaamadaha aan tooska ahayn, ma aha inay beddelaan nolosha Kaniisadda ama farriinteeda dhexe iyo shaqada. Ciise, Ilaah ama xitaa Qorniinku intabadan lama sheegi doono. Isha isha waxqabadyadan marwalba way adag tahay (Hadday dhan tahay) waa in la sheegaa, in kasta oo masraxa Masiixu uu ku xidhan yahay ficil ama dhammaystir. Waxaa jira xad u yaal shahaadooyinka aan tooska aheyn. Waxay u badan tahay inay noqdaan kuwo mug leh marka loo eego markhaatiga tooska ah iyo shaqada Kaniisadda. Natiijooyinka ayaa laga yaabaa inay noqdaan kuwa ka badan kuwa ka socda ereyga aasaasiga ah ee kaniisada iyo marag. Mararka qaar soo-jeedinta ay soo bandhigaan Masiixiyiinta daneeya wanaagga guud ma aqbalaan xubnaha bulshada ama awooda gaarka ah, awoodaha iyo tusaalooyinka, ama waxay noqdaan uun midho dhal. Markalena mar labaad ayaa loo dabaqi karaa si ay saamayn ugu yeelan karaan boqortooyada Ilaah. Shaqada ruuxiga ah ee ururka ee kor u qaadida gargaarka maxbuuska, oo uu aasaasay Chuck Colson (Iskaashiga Xabsiga), oo ku lug leh xabsiyada gobolka ama dowladda dhexe, ayaa tusaale fiican u ah tan, laakiin inta saameyn ah ayaa la saari karaa lama qiyaasi karo. Guusha qaar waxay noqon kartaa wax laga xumaado waqti gaaban. Waxaa sidoo kale jiri doona fashil. Laakiin kuwa loo soo bandhigo maragyadan aan tooska ahayn, kuwaa, in kasta oo ay fog yihiin, oo ka tarjumaya doonista Ilaah iyo dabeecadda, ayaa sidan loogu jihaynayaa nuxurka waxa Kaniisaddu bixiso. Shahaadooyinka ayaa sidaas oo kale ah nooc ka mid ah hubka pre-wacdiyaynta hore.
Waajibka koowaad ee bulshada ku xeeran waa in la hubiyo wanaaga iyo kala dambeynta si kaniisada ay si kasta oo ay ahaataba u fuliso howlaheeda lama huraanka ah, doorka ruuxiga ah beel diimeed iyo xubnaheeda, marqaatigooda aan tooska aheyn ee ka dhex jira bulshada ballaaran, waa ay ku dhaqaaqi karaan. Waxay inta badan la mid noqon doontaa hubinta xukunka sharciga, cadaaladda dadweynaha. Hadafku wuxuu noqon doonaa wanaagga guud. Sidaa darteed taxadarka ayaa looga qaadayaa inaan looga faa’iideysan kuwa tabarta yar ee xoogga leh.
Waxay u muuqataa in Bawlos uu maanka ku hayay goorta, sida lagu akhrin karo Rooma 13, wuxuu ku qeexay waajibaadka saxda ah ee saaran cilmaaniyiinta. Waxa kale oo laga yaabaa inay ka turjunto wuxuu Ciise ula jeeday markuu yidhi: "Marka u dhiib Emperor waxa uu yahay Emperor iyo Ilaah waxa Ilaah yahay!" (Matayos 22,21), iyo wuxuu Butros damcay inuu ku caddeeyo warqaddiisa: «Adigu amarkaaga aawadeed oo dhan ha u addeeco Rabbiga aawadiis, ha u ahaato boqorka inuu ahaado amiirka amase taliyaha sida kuwii uu u soo diray inay ciqaabaan kuwa xadgudbay iyo in la ammaano kuwa wanaagga fala » (1 Butros 2,13: 14).
Boqortooyada Ilaah (Qaybta 5aad)